Masinina fantsika fantsika tsara indrindra 35000RPM Portable Nail Efile
Karazana: milina fantsika fantsika
Hafainganam-pandeha ambony indrindra: 30000rpm, 35000rpm, 40000rpm
Kojakoja: Fantsika Drill Bits
Endri-javatra 1 Portable Protective Shell Hook
Endri-javatra 2 Cordless & Rechargeable
Fantsika fantsika -Diamond Nail Drill Bits 3/32 mirefy Fantsika Bits hanalana Acrylic Gel Fantsika Cuticle Manicure Pedicure Tools
1.Biby fantsika diamondra: Biby fantsika diamondra samihafa- Ny endrika sy habe isan-karazany dia mahafeno karazana filàna maro.Mety amin'ny fampiasana manicure sy pedicure.
2.Manome fanapahana ambony, endrika, rakitra, fanafohezana, fanapahana backfill, fanadiovana ambanin'ny fantsika ary maro hafa!
3.Fitaovana fantsika matihanina kalitao dia misy fantsika fantsika diamondra mahay, ho an'ny serivisy fantsika matihanina rehetra!
4.Fa maninona no mihady ny cuticle mba hanadiovana azy ireo nefa azonao ampiasaina ity Aieil Cuticle Clean, 3/32 Bit ity?Izy io dia natao manokana ho an'ny fanadiovana moramora ny cuticle sy hanamora ny asanao.
5.Te hanandrana ny fanavaozana farany amin'ny fantsika?Eny ary, ity 3/32″ Aieil Bits Diamond Nail Drill Bits ity dia tena hanaitra tokoa!Raiso ny fanapahana tsy miovaova tadiavinao sy ny vokatra ilainao izao!
Volomparasy Tornado Carbide Burrs Nail Drill Bits ho an'ny milina fantsika
Karazana: Tungstène Carbide Nail Drill Bit
Fitaovana: Tungstène Carbide
Endriny: tornado Top
Haben'ny bitika: Grit antonony 3/32″ (Mifanaraka amin'ny milina fandavahana fantsika mampiasa bitika 3/32)
Savaivony ny loha bit: 7.0mm/0.276-inch Halava
Toerana fitahirizana mahafatifaty ho an'ny fantsika fantsika: tsara tarehy sy tsy misy vovoka.Mora ny mahita ny fonony ary mamantatra ny bitika tiana.
Garantie 1 taona: Ataovy azo antoka ny fiarovana anao sy ny olon-tianao amin'ny fanadiovana ny fantsika sy ny fantsika.Ny serivisy mpanjifa kilasy voalohany dia omena amin'ny fanontaniana momba ny vokatra sy ny olana momba ny fiantohana.
Tungstène Carbide Nail Drill Bits Fantsika File Bits 3/32 mirefy ho an'ny Acrylic Gel Nails Cuticle Manicure Pedicure
●Fiomanana hoho haingana sy mahomby ary fanesorana hoditra maty.
●3/32″ haben'ny rantsankazo & mety amin'ny fandavahana fantsika mahazatra indrindra.
●Fitaovana seramika matanjaka sy mateza ary mahatohitra hafanana karbida sy diamondra ampiasaina maharitra.
●Ampiasaina hanapahana ny cuticle na ny sisin'ny hoho na hanalana loto ao ambanin'ny hoho ho fikarakarana fantsika ankapobeny.
●Ide fanomezana tsara ho an'ny namanao, ny zanakao, ny vady, ny reny sy ny sisa izay tia nail art ary te hamorona ny nail art ho azy manokana.
Tungstène Carbide 5 in 1 Nail Bit mahitsy tapaka 7.0mm
Tokony ho 10g
Haben'ny ratra: 3/32 1/8
Haben'ny sodina: 7.0mm
Coating: Blue Nano/ Volamena/ Volafotsy/ Volovolom-bolamena/ Vifotsy/ Diamondra/Rainbow Loko
Tungstène Carbide lelafo miendrika fantsika Drill Bits
Miaraka amin'ny tapany revolisionera sy ny ampahany miasa azo antoka, ny bitika ambony malefaka dia mamokatra fitsaboana tsara indrindra haingana sy azo antoka kokoa.
Haben'ny sodina: 6.6mm
Tungstène Carbide Barrel Fantsika Drill Bits
Tungstène Carbide Cone endrika fantsika Drill Bits
Tungstène Carbide Barrel Large Smooth Top Nail Drill Bits
Mba hanesorana ny fantsika miitatra ambanin'ny sary sokitra na lakaoly fanampiny
Haben'ny sodina: 3.1mm
Tungstène Carbide Solid Carbide Polygon Nail Drill Bits
Tungstène Carbide Straight Stick Nature Nail Buffer Bit